Ma jiraan wax Software la mid ah ama Alternative si VirtualDub?
Talinayo VirtualDub lagu bedelan karo
VirtualDub waa xor ah oo awood video qabashada iyo processing software u madal Windows. Ee ah kuwa horay loo isticmaalo VirtualDub u habaynta ama lagu qoro files videos ay , waxa aad raadineyso kale ah in waddaa on dhufto ee kala duwan (Windows, Mac iyo Linux )? In this article, aan soo bandhigno serveral kale oo VirtualDub. On Read oo ka heli mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ku haboon baahidaada.
Video Editor Waa ka duwan fiican VirtualDub. Waxaa gebi ahaanba taageertaa qaabab badan oo ka badan VirtualDub oo ka mid ah dhammaan hawlaha tafatirka caadi video VirtualDub bixisaa. In kasta oo aysan u taageeraan fur-tago, waxaad si fudud si fudud retouch kartaa video la saamaynta sida cut boodi, usii-wareeg iyo ka badan oo ay wadaagaan shuqulladiinna dunida.
Qaababka ugu muhiimsan ee Video Editor
Taageer kala duwan video files
Tan kale VirtualDub taageertaa dhammaan qaabab video ay ka mid yihiin MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, Mpg, TS iyo in ka badan. Taas macnaheedu aadan haysan inay wax "pre-diinta kaliya hoos u worries- wax kasta oo aad leedahay si aad u bilowdo ka qaban!
Waxay bixisaa boos shaqo fiican abaabulan oggolaanaya video, qoraalka iyo Yeeelid audio. Feature jiitaa-n-dhibic ayaa awood u aad si fudud u helaan wax walba. Suuqa kala eegis ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in interface ugu weyn si aad u awoodo in uu si deg deg ah loo arko saameynta-waqtiga dhabta ah tahay.
Hawlaha tafatirka Xoog
Waxaad qabsato kartaa video isticmaalaya ka duwan, fursadaha nuur iyo Saturation la hal-click. Diyaariyeen ah ee saamaynta video sida shaandhada video, kala guurka, Intro / credits, wareeg ah usii, humaag, ka horimaanaya, bood gooyaa oo dheeraad ah oo sidoo kale la siiyaa si kor video goobtii.
Doorashada soo saarka kala duwan
Marka habka tafatirka ay ka badan tahay, waxaad si fudud u badbaadin karo ama wadaagi abuurka. Hababka kala duwan waxaa ka mid ah wax soo saarka Deji video ah qaab gaar ah file in ay la jaan qaada Qalabka telefoonada gacanta, koombiyuutarka si toos ah u gal YouTube ama Facebook ama gubasho ah DVD .
Video Converter taageertaa processing iyo diinta ku dhow oo dhan oo ka mid ah noocyada file caan ah in uu hadda la isticmaalo. Waxay leedahay fursado tafatirka yar oo ay bixiyaan VirtualDub, laakiin dhisay-in editor video kale oo ay bixisaa dhowr hawlaha video tafatirka aasaasiga ah sida dalagga, jar, isku shaandheyn, ku dar filtarrada iyo in ka badan. On top of in, waxaad si toos ah kala soo bixi kartaa videos ka goobood oo online ah ama abuuro iyo gubi kuu gaar ah videos gal DVD ah. Horena ee ugu fiican video goobaha loogu talagalay loo maqli karo ee kala duwan ee qalabka la qaadi karo ka dhigaysa in ay ka sii habboon.
Virtual VCR waa codsi qabashada ah DirectShow video for Windows. Waxaa si wadajir ah ula kaararka video qabsaday ka shaqeeya in ay qabsadaan audio iyo video in drive adag aad qaab file AVI ah. Waxa kale oo ay digitizes content audio / video ilo sida Webcama, kaamirada, iyo video (Video cajalad taariikhqorihii). Si kastaba ha ahaatee, hawlaha tafatirka waa xoog badan ka yar marka la barbar dhigo VirtualDub.
Free Video Dub waa aalad video tafatirka miisaanka yar oo user-friendly ah ee Windows oo sida VirtualDub. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video AVI , MOV, FLV , mod, MKV, MTS / M2TS iyo in ka badan. Shaqada ugu weyn waa in ay tirtirto qaybaha rabin ka video files aan dib-u-sireed, taas oo macnaheedu yahay hayaa tayada asalka ah ee aad video, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay ka maqan ka mid ah qaar ka mid ah hawlaha tafatirka video aad raadineyso.
Avidemux waa mid aad u dhow in ay VirtualDub ku salaysan hawlaha. Waxaa xitaa waddaa soo tebiyaan ka badan oo ay ku jiraan Linux, Mac OS X iyo Windows. Waxaa loogu talagalay hawlaha fudud video goynta, shaandhaynta iyo Deji. Waxa ay taageertaa noocyada file ka badan VirtualdDub, oo ay ku jiraan AVI, DVD socon MPEG files, MP4 iyo ASF, iyadoo la isticmaalayo noocyo kala duwan oo codecs. Hawlaha la iswada karaa iyadoo la isticmaalayo mashaariicda, safka shaqada iyo scripting awood badan.
OpenShot yimaado la user-friendly interface ka badan VirtualDub. Waxa ay taageertaa kala duwan audio, video iyo image qaabab iyo aad u saamaxaaya in ay sameeyaan qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka aasaasiga ah sida goo, cut, dalagga iyo in ka badan. Waxa kale oo aynu aad si fudud ku dari subtitles, kala guurka iyo saamaynta, ka dibna si DVD, YouTube, vimeo, Madaxweyne Siilaanyo 360, iyo qaabab kale oo badan oo caan ah dhoofin aad video.
# 7: Windows Movie Kan sameeyey,
Windows Movie Uumahaaga software ah video free tafatirka for Windows. Waxaad si fudud edit karaa, edit iyo wadaagno videos dhawr fudud jiitaa-n-dhibcood. Muuqaalada tafatirka waxaa ka mid ah ku daray saamaynta video, kala guurka, horyaal / credits, track audio, Sheeko iyo in ka badan. Marka tafatirka la sameeyo, waxaad si toos ah u wadaagi kartaa video via internetka, email ama CD.
iMovie waa editor video weyn oo lacag la'aan ah Mac taasoo helo sumcad wanaagsan. Waxaa ku qalabaysan qaababka badan oo hal abuur leh sida movie trailer, hal talaabo video iyo saamaynta audio, function PIP iyo in ka badan. Marka aad ku dhameysan habka tafatir ah oo dhan, iMovie gelineya inaad la wadaagto aad video in YouTube ama dhoofinta aad iPad, iPhone, Lugood, iwm, laakiin ma taageeri plugins mar dambe.
Jahshaka waa editor video sare hadda waddaa on Linux, Windows iyo Mac OS X. Waxay leedahay awoodda badan: sameeyo dhigin mid 2D / animations 3D, midabada saxda ah iyo edit video iyo in ka badan. Waxa kale oo aad si fudud u maarayn karaan oo ay wadaagaan dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay oo qayb ka ah abuurista content cajiib ah.
# 10: Video qalabeed
Video qalabeed Waa online qalab video tafatir oo lacag la'aan ah si ay kaaga caawiyaan in aad loogu badalo, edit, cut, record, dalagga ama demux video files. Waa mid aad u fudud in la isticmaalo - kaliya aad u baahan tahay si ay u geliyaan faylasha aad, dooro hawsha aad u baahan tahay, sameeyo tafatir ah oo goobta ka shaqayn doonaa video aad u.
> Resource > bedelan karo > kasta oo lagu talinayo VirtualDub Alternative?